Mogadishu Journal » 2019 » June » 9
//June 9, 2019
Deegaanka Soomaalida oo kala badh iyo dheeraad ka helaya khayraadka dabiiciga ah ee dalka
Mjournal :-Golaha federaalka Itoobiya ayaa ansixiyey xeer qabyo ahaa oo hor yaallay gohala. Waxaanu yahay xeerkaa goluhu ansixiyey xeerka qaybisga khayraadka dabiiciga ah ee dalka Itoobiya, waxaana sidaa ku waramay telefishanka ETV. Xeerka goluhu ansixiyey wuxu dhigayaa in...
Somali Journalists Syndicate (SJS) condemns the act of shooting, threats to kill and harassment by Somali military soldiers against Radio Kulmiye reporter and producer Hussein Abdulle Mohamed (known as Hussein Gurmad) in Somalia’s capital, Mogadishu on Sunday 9 June, 2019. Around...
Mjournal :-Hal ruux ayaa la xaqiijiyay in uu ku dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay ka dib markii gaariga nooca Hoomeyda Soomaalidu u taqaano uu dulmaray Mooto Bajaaj Xaafadda Warshadda Caanaha ee degmada Hodan ee Magaalada Muqdisho. Qofka dhintay ayaa ahaa Wadihii Mootada...
Yuusuf Dabageed oo ka hor-yimid xil ka qaadista lagu sameeyay iyo Baaq uu u diray dowladda Federaalka
Mjournal :-Guddoomiyihii Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar (Yuusuf Dabageed) ayaa sharci darro ku tilmaamay xil ka qaadistii uu Madaxweynaha Hirshabeelle uu ku sameeyay, isagoo ugu baaqay dowladda Federaalka inay soo farageliso arrinta ka taagan Gobolka Hiiraan. Yuusuf Dabageed...
Madaxwey-neyaasha Masar Iyo Eritrea oo ka wada hadlay Xaaladda Soomaaliya
Mjournal :-Madaxweynaha dalka Masar, ahna Guddoomiyaha sannadkan ee Ururka Midowga Afrika, C/fataax Al-sisi waxa uu Qasriga Al-itixaad ee magaalladda Qaahira kula kulmay dhigiisa dalka Eritrea, Issiyas Efewerki oo booqasho 2 maalmood ah ku jooga dalkaasi. Wargeyka Al-ahram ee ku...
R wasaare Khayre oo magacaabay guddigga qaban qaabada xuska todobaadka xoriyadda
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa magacaabay guddi ka shaqeeya qaban qaabada munaasabadda xuska todobaadka xoriyadda Soomaaliya. Guddigan uu magacaabay ra’iiusul wasaaraha Soomaaliya in ay ka shaqeeyaan qaban...
Ra’iisul Wasaare Khayre oo la kulmay sarkaal ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ingiriiska
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha guud ee siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda Boqortooyada Ingiriiska, Richard Moore. Ra’iisul Wasaaraha iyo Richard Moore ayaa kulankooda uga...
Mjournal :-Kulankaan oo lagu qabtay Xarunta Maammulka gobolka Banaadir ayaa waxaa shir guddoomiyay Gudodomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Eng, Cabdiraxmaan Yariisow,waxaana looga hadlayay Amniga Caasimadda. Kulanka waxaa Goobjoog ka ahaa Taliyaha Ciidanka Booliska...
Sarkaal ka tirsanaa maamulka Hirshabeele oo la dhaawacay
Mjournal :-Wararka laga helayo deegaanka Jawiil ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay ku waramayaan in halkaasi Maanta lagu dhaawacay Sarkaal ka tirsanaa Waaxda Maaliyadda ee Maamulka Magalada Baladweyne ee Gobolka Hiiraan. Askari ka tirsan Ciidamada qaada Canshuurta ee loo yaqaano...
Dagaal ciidamada Jabuuti iyo Al-shabaab ku dhaxmaray gobolka Hiiraan
Mjournal :-Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo duleedka degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan ku dhexmaray Ciidamada Jabuuti oo ka mid ah AMISOM iyo Al-Shabaab. Dagaalka ayaa yimid kadib markii Xubno ka tirsan Al-Shabaab...